Vatengi Zvemagetsi - Pandawill Technology Co, Ltd
Zvemagetsi zvemutengi, kubva kune zvigadzirwa zveruzha kusvika kupfeka, kutamba kana kunyatsoita chokwadi, zvese zviri kuwedzera kubatana. Nyika yedhijitari yatinorarama inoda nhanho yepamusoro yekubatanidza uye epamberi emagetsi uye kugona, kunyangwe kune yakapusa zvigadzirwa, kupa vashandisi pasi rese.
KuPandawill, tinounza ekupedzisira ekugadzira zvigadzirwa zvemagetsi zvevatengi zvemagetsi, kubva dhizaini, mainjiniya, uye prototyping, kugadzirwa kwemazhinji uye kumagumo-kusvika-kumagumo chigadzirwa lifecycle mhinduro.
Sekambani yemagetsi yekugadzira kambani, isu tinopa yakazara turnkey masevhisi kubva kune ekugadzira masevhisi ekudzosera mainjiniya uye obsolescence manejimendi. Kutsvaga izvo zvakanaka zvinhu uye kuona kuti zvese zvinoungana zvakakwana zvichibva pane zvaunoda, ndiko kugona kwedu kwepamoyo.
Dhizaini, mainjiniya, prototyping, yakadhindwa wedunhu bhodhi gungano (PCBA), kuunzwa kwechigadzirwa chitsva (NPI services), smart supply chain solutions, intellectual property management ...
Yedu mamiriro-e-iyo-ehunyanzvi kugona, inosanganiswa neyedu yakasarudzika network yevanokwanisa vatengesi, inoita isu mudiwa kuenda-kune-inoshanda imwe-yekumira mhinduro kubva prototyping kune kuwanda kugadzirwa uye yekupedzisira-kumagumo chigadzirwa lifecycle mhinduro.
Zvemagetsi kugadzira sevhisi yeVatengi veMagetsi, kugona kwedu kunosanganisira:
• Audio zvigadzirwa uye masisitimu
• Zvigadzirwa zvekurapa zvevatengi
• Multimedia zvishandiso nemidziyo
• Dzidzo tech